Simbisa Yako Yemagariro Midhiya Simba neUnmetric's Smart Dhata Turu | Martech Zone
Munyika umo kuwanda kwemabhizimusi ekuwedzera pamhepo zvakanyanya kunoenderana nezvavanosangana pasocial network, kugadzira zano rezvemagariro venhau rinogona kunge riri dambudziko rechokwadi. Zvakadaro mukana unoshamisa wekushambadzira midhiya enhau unoramba uchityaira mabhizimusi akananga kune aya magero kukwezva tarisiro uye kuwedzera ruzivo rwemhando
Panyaya yekuwedzera nekukurumidza kwemaitiro enhau enhau, a 2013 kudzidza naLinkedin uye TNS inoratidza kuti 81% yeSMBs parizvino inoshandisa aya maratidziro kufambisa kukura kwebhizinesi, ne61% yavo vachiona mabhenefiti akakosha maererano nekuwana vatengi vatsva. Nekudaro, kuti uvandudze kuoneka kwechiratidzo chako pakati pevateereri, iwe unoda zano kwete pane hunch uye apa ndipo pari Unmetric anosvetukira mukati.
Kubata Dhata Zvakakomba kune Zvemukati Strategy
Unmetric iri data analytics chikuva chine chinangwa ndechekupa simba mabrands 'kuvepo midhiya nekupa akakodzera maseti edata munguva chaiyo. Kubva pakuongorora kwepamusoro kuita zvinyorwa kusvika kumukwikwidzi ongororo, chishandiso chinoshandisa huwandu hwenzvimbo dzekuunganidza maseti edata iro bhizinesi chairo rinogona kuwana rakakosha kwazvo. Nenzira iyi, zvigadzirwa zvinogona kugadzirisa dhata-inodzoserwa pasocial media zano iyo inomira yakawanda mikana yekukwezva vatengi vavanovavarira.
Pfungwa iyi ndeyekugadzirisa matanho ese akakosha ane chekuita nekugadzirwa kwemukati uye kuiswa kuti ubudise rwizi rwakatsiga rwevatungamiriri vakatendeka. Nekukupa iwe mazano pamusoro pemhando dzipi dzezvinyorwa zvinotyaira zvakanyanya kubatanidzwa uye kuratidza hurukuro dzakakodzera munharaunda dzakananga, Unmetric inogonesa zvigadzirwa kuti vanzwisise maitiro evateereri vavo uye voshandisa ruzivo urwu kugadzira zvimwe zvinokanganisa zvemukati.
Mashandiro anoita Unmetric
Sezvo rimwe rematambudziko makuru munharaunda yemagariro enhau iri kugadzira zvinomanikidza zvemukati, Unmetric inotarisira kufambisa izvi nekukupa kurudziro, kuongorora nekukasira, pamwe nekusvika kwemamwe mapositi. Chikamu cheKufuridzira chinofunga nezvezvakatemerwa zvakatemwa zveimwe kambani kuratidza hova dzezvakakurumbira zvinyorwa.
Iyo yekuwedzera nhanho mukwikwidzi kuongorora, uko iyo chikuva inokuzivisa iwe kana imwe posvo, mufananidzo kana vhidhiyo inotanga kugamuchira zvisina kujairika huwandu hwekucherechedzwa online. Izvi zvinopa mukana wekukurumidza wekujoinha hurukuro inoenderera kana kungoona maitiro evatengi.
Uyezve, chimwe chezvinhu zvacho Unmetric inotora kusvika padanho nyowani nyowani ndeye post uye yekuita ongororo iyo inofanirwa kushanda sehwaro hwekuronga nhanho dzemangwana dzekambani. Chikamu cheKutarisa chinomiririra hurongwa hunokurumidza kuratidza zvinhu kana maprofiles ari kukurumidza kuwana kutarisirwa kuti mabhenji arambe achitaurirana nhaurirano dzese dzinoitika.
Ronga - Enzanisa - Ongorora
Kuunganidza uye kuongorora inoitika data inogona kuve yakaoma kuita makambani mazhinji anogona kuona sekuparadza nguva. Nekudaro, nekugara uchitarisisa mafambiro enhau enhau, mabrandari anogona kuona zviri nyore mikana yakakosha uye kuita kuti hurongwa hwekuronga zvemukati nekugadzirisa zvisanyanya. Kuburikidza neiyo intuitive interface, Unmetric inounza zvidimbu zvemashoko zvingave zvakakosha pakuparadzira imwe kambani kambani pesvedzero.
Tichifunga nezve kukosha kwakakura kwekugadzira yemagariro nhepfenyuro nzira yekukwezva kune yakanyanya kuwanda yevashandisi vashandisi, mabhizinesi madiki anotarisirwa kutarisa kune aya magero kupfuura nakare kose. Unmetric inotarisira kuchengetedza vashambadziri nguva yakakosha yekuronga nekushandisa marongero enhau enhau uye kugonesa makambani mazhinji kuve nhengo dzakakwirira dzenzanga yenhau.
Tags: ongorora zvemukati mevanhuzvemukati zanogadzira zvinomanikidza zvemukatimagariro enhau analyticspasocial media uye zvemukati zanopasocial media pesvedzerosocial media chikuvaunmetric
Une Podcast? Usakanganwa Mic Mureza!